Global Voices teny Malagasy » Ny Bilaogy ‘Untranslatable / Tsy Mety Adika’, Mikosoka ireo Voambolana Tokan’ireo Fiteny Madinika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2017 16:21 GMT 1	 · Mpanoratra Gwenaelle Lefeuvre Nandika avylavitra
Sokajy: Fiteny, Mediam-bahoaka, Rising Voices
Napetraka ny bilaogy iray antsoina hoe Untranslatable  mba hanomezana ho an'ireo mpandàla ny teny ireo fehezan-teny sarotra na tsy mety adika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Misy amin'ny fiteny rehetra ireny teny ireny: teny milaza fahatsapàna na fihetsehampo, mazàna sarobahana sy tena manokana. Ny sasany amin'ireny teny tsy mety adika ireny no efa malaza sahady ankehitriny (toy ilay teny Portiogey malaza hoe saudade ), sy ireo hafa izay mamàka lalina aminà kolontsaina iray manokana (ohatra, ny teny espaniola sobremesa ). Saingy toetra ifampizaràn'izy rehetra ny di-doha izay mahatonga azy ireny mahatohitra izay ezaka rehetra ho fandikàna tsotra. Teny iray na fomba fiteny iray tsy hahavita azy, araka izany dia fanazavana feno na indraindray ilaina mihitsy ny filazalazana antsipirihany ny vanimpotoana sasantsasany mba hahatakarana hatrany ifotony ny tian'ilay fomba fiteny holazaina amin'ny teny iray.
Hatry ny ela ireny teny ireny no efa nangonina ho ao anaty lisitra ety anaty aterneto. Saingy rehefa mitohana eo amin'ny Japoney, Alemàna,Frantsay, Portiogey na Fainlandey ireny lisitra ireny, i Steven Bird  mpahay momba ny teny no sady mpamorona ny Untranslatable kosa nanapaka hevitra ny hifantoka amin'ireo fiteny kely.
Ohatra, zarain'ilay blaogy ireo teny avy amin'ny fiteny Mwotlap  any Vanuatu toy ny :
“vakasteglok”  – Karakarao ny ray sy reninao, ho valimbabena tamin'ìizay rehetra nomeny anao nandritry ny hatanoranao.
Ary ireo teny avy amin'ny fiteny Hunsrik  tenenina any amin'ny faritra maro ao Brezila, toy ny :
“kwadi”  – ny hakamoana tsapan'ny olona iray rehefa avy nitanina andro nandritra ireo andro mangatsiaka.
Raha ny filazan'i Bird azy manokana ao amin'ny pejy Mombamomba  ny bilaogy:
Ireo mpiteny ireny “fiteny sarobidy” lalàin'ny Untranslatable ireny dia asaina an-tànan-droa mba hametraka ireo teny ankafiziny ho ato .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/26/100927/
 lisitra ety anaty aterneto. : http://www.thebookoflife.org/untranslatable-words/
 fiteny Mwotlap: https://en.wikipedia.org/wiki/Mwotlap_language
 fiteny Hunsrik: https://en.wikipedia.org/wiki/Riograndenser_Hunsr%C3%BCckisch_German
 ho ato: http://www.untranslatable.org/submit.html